ပူနွေးတဲ့အဖြူဒီတီးဝိုင်းအလင်း 16 ခွကေို LED Amazon ကသာ $ 8 မှာပူဇော်သော - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ BGR - "နွေးအဖြူဒီ band ကို Amazon ကသာ $ 16 မှာပူဇော်သောအလင်း 8 ခွကေို LED
BGR - နွေးအဖြူဒီတီးဝိုင်းအလင်း 16 ခွကေိုအမေဇုံအပေါ်သာ $ 8 မှာပူဇော်သော LED
Tele RELAY တစ်ခု 19 စက်တင်ဘာလ 2019
သငျသညျကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲကြော့နှင့်ခေတ်မီဆန်းပြားနှစ်ဦးစလုံး, သငျ့အိမျမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အလင်းရောင်သက်ရောက်မှုမှ add လိုပါသလား? ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ဤအရပ်၌ဖြစ်ကြသည်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ အဆိုပါ LED အလင်း THE 12V ဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ ရှည်လျားသော 16 မီတာကိုတိုင်းနှင့်လက်ရှိအမေဇုံအပေါ် 8 ဒေါ်လာထက်လျော့နည်းတစ်ဦးချင်းစီကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ သင်အရမ်းအေးမြအလင်းရောင်သက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးရန်ပဲအကြောင်းကိုဘယ်နေရာမှာမဆို install လုပ်နိုင်ပါတယ်, သင်ပင်သင်လိုအပ်အတိအကျအရှည်မှဖြတ်နိုင်ပါ။ ကျိန်းသေတဲ့တစ်ချက်ယူပါ။
strip မြှောင်တောက်ပဦးဆောင်သည့် 16,4ft: AC adapter သင်ကလိုအပ်တယ်ဆိုရင်အမေဇုံအပေါ် 'စဉ် B019Q3U72M မီး' 'လိုအပ်သော်လည်းမပါဝင်, ရှာဖွေနေသည်။
【】လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်: နောက်ကျောအပေါ်အရည်အသွေးမြင့်ကော်တိပ်နှင့်အတူကြောင့်အလွယ်တကူ mounting မျက်နှာပြင်မှပူးတွဲပါနိုင်ပါတယ်။
ရရှိနိုင် Sha အမျိုးမျိုးပုံစံမျိုးစုံ: တောက်ပချွတ်အဆိုပါကတ်ကြေးတံဆိပ်တလျှောက်တိုင်း3အယ်လ်အီးဒီဖြတ်နဲ့ connection ဖြစ်ပါသည်, connector ကိုနှင့်အတူချိတ်ဆက် welded ခံရဖို့မလိုအပ်ဖို့လွယ်ကူနိုင်ပါသည်။ သင်သည်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံနဲ့အရှည်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
【သုံးစွဲဖို့တောက်ပခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ: 300 2835 SMD LED ကိုယူနစ်နှင့်အတူအလင်း၏ဤတီးဝိုင်းမီတာလျှင် 240 lumens ဖြစ်ပါသည်, ဟာ operating ဗို့ 12V DC ကဖြစ်ပါသည်, အဘို့အမြင့်မား 12V ပါဝါအဒက်အသုံးမပြုကျေးဇူးပြုပြီး အစားအသောက်များတွင်။ အဆိုပါ wattage 18W ဖြစ်ပါသည်, ထို LED အလင်း strips တွေစုစုပေါင်း wattage ပါဝါ Adapter ကိုအများဆုံး wattage ထက်မကျော်လွန်သင့်ကြောင်းသတိပြုပါပေးပါ။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်သားသမီးတို့အဘို့, လူတို့အဘို့, ထိတွေ့နိုင်သောဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်။
【 Wide Applications ကို: ပုံနှိပ် circuit ကိုချွတ်, ပါးလွှာကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ တောင်ပေါ်ကခေါက်ပုံစံများသို့မဟုတ်ရှိုင်းဘို့တင်းပါး, ဒါမှမဟုတ်စဉ်ဆက်မပြတ်အတန်း၌တည်၏။ အိမ်မှာချက်ပြုတ်ဘို့စံပြ, မြို့ရိုး, မျက်နှာကျက်နှင့်မှိုမှဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို add, တီဗီများ၏နောက်ခံအလင်း, အလင်းတစ်သင်းလုံးကကစားသမား, သင်ကအလှဆင်အလင်းရောင်လိုအပ်ဘယ်မှာ crowbar သို့မဟုတ်အခြားအရပ်ဌာန။
လိုက် Twitter ပေါ်တွင် @BGRDeals web ပေါ်မှာနောက်ဆုံးပေါ်အပေးအယူအားဖြင့်သင်တို့ကို fit မှ။ ပမာဏကန့်သတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ စျေးနှုန်းများအသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြပြီးကူပွန်မည်သည့်အချိန်တွင်မကုန်ဆုံးစေနိုင်သည်။ တချို့ကကမ်းလှမ်းမှုအားလုံးဖောက်သည်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ BGR ဤဆောင်းပါးကိုတဆင့်ထားရှိအမိန့်အပေါ်တစ်ဦးကော်မရှင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
Xbox နဲ့ PS4 များအတွက် Modern Warfare - BGR
BGR - ကားများများအတွက်ပဲ့တင်သံအမှတ်တစ်သမိုင်းဝင်နိမ့်သည်ဖြစ်သော $ 19,96 မှပြုတ်ကျ
PHOTOS. Le tendre baiser de cinéma de Louis et Marie Ducruet durant leur lune de miel
အိန္ဒိယ - ယနေ့ Anantnag အစည်းအဝေး - Anantnag ရဲနှင့်အကြမ်းဖက်သမားများနှင့်တွေ့ဆုံ | အိန္ဒိယသတင်း
16 အောက်တိုဘာ 2019 - ဗီဒီယိုမှ RTL Petit Matin မှ Guest ည့်သည်
Berhalter: USMNT ပျောက်နေတယ်
မင်းသားဟယ်ရီနှင့်အနီရောင်ဆံပင်မင်းသမီးအားမင်းသားကမေးသည်။ - ဗီဒီယို
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်6,081
TECH & Telecom2,386